Sawir qosol badan oo laga sameeyay Tuuryare.!! | Caasimada Online
Home Warar Sawir qosol badan oo laga sameeyay Tuuryare.!!
Sawir qosol badan oo laga sameeyay Tuuryare.!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Sawir gacmeedkaani ayaa lagu muujiyay in Taliyaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka Somalia C/raxmaan Tuuryare uu faro ku hayo dadka shacabka magaalada Muqdisho.
Sawirka ayaa lagu cabiray heerka uu gaarsiisan yahay damaca Tuuryare oo isku adeegsanaaya ciidamada NISA iyo dadka shacabka.
Farshaxaniistaha sawiray sawirka ayaa waxa uu dusha sare ka saaray qoraalo muujinkara in Tuuryare uu ka macaasho dhaqaalaha laga uruuriyo dadka loo soo xiro fal danbiyeedyada sida ku cad qoraalka sawirka.